Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya ee Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya ee Soomaaliya
Dawladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya iyada oo ka cabanaysa war horay uga soo baxay wasaaradda Arrimaha dibadda ee Kenya, sida lagu sheegay war ay faafisay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya.
Danjire Lucas Tumbo ayaa loo gudbiyay waraaq cabasho ah oo dawladdu ay uga dacwoonayso qoraal uu Twitterka soo dhigay Macharia Kamau oo ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya.
“Waxa aan u aragnaa farriintaasi lagu faafiyay Twitter-ka mid meel ka dhac ku ah madax banaanida Soomaaliya, midnimadeeda iyo bedqabka dhulkeeda, sidoo kale waxa ay dhaawacaysaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Soomaaliya.
“Soomaaliya waxa ay u taagantahay deris wanaagga, xushmad is weydaarsiga iyo iskaashiga dhow ee kala dhexeeya wadamada deriskeeda ah, sidaas si la mid ah ayay ka rajaynaysaa Kenya.” Ayay intaas ku sii dartay.
Fariinta Twitter-ka ee ay Soomaaliya qoonsatay ayaa sidan u qorneyd “Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibedda Kenta Mr Kamau ayaa galabta wadahadalo la yeeshay wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Mudane Yaasiin Xaaji Maxamed, waxay labada ka wada hadleen danaha wadaagga ah ee LABADA DAL iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga”.
Balse wasiirka arrimaha dibedda Kenya Monica Juma oo la waydiiyay su’aasha ah mowqifkooda aqoonsiga Somaliland ayaa tiri “Moowqifka Kenya ee Somaliland waa kan Midoowga Afrika uu ka taaganyahay, sida ku xusan go’aankii Midoowga Afrika ee 1964-tii”.Article share tools.
Previous articleSoomaaliya oo ka qeyb galeysa Shir ka furmay Moscow
Next articleSafaaradda Mareykanka Ku Lahaa Dalka Tunisia Oo Maanta La Xidhay Iyo Sababta